Boomerangs: Maitiro Ekuvaka uye Kuavhura Iwo - Ikkaro
kudzidziswa >> Boomerangs
Chii chinonzi boomerang?
Boomerang chinhu icho, mushure mekukandirwa, chinodzokera kwachinobva nekuda kweicho chakakosha chimiro uye kuvhura chimiro. Chero chipi zvacho chinhu chinoshanda kuvaka boomerang: huni, plastiki, kadhibhodhi, kabhoni fiber, aluminium, nezvimwe.
Mashandiro anoita boomerang
Vanogona kutora chero chimiro uye vanofanirwa kuvhurwa kuitira kuti vatenderedze pane yavo yega kusimudza mudenga kuri nekuda kwechimiro chemashizha, ayo, ane chimiro chakafanana neicho chemapapiro endege, ari "kurwisa" mhepo apo boomerang inoshanduka pachayo uye ichifamba. Iyo nzira yekutamisa yakazvimiririra neiyo inomhanyisa kumhanyisa uye kumhanya kwaino tenderera pane yayo yega axis uye inogara iri mune yega boomerang. Izvi zvinoitika nekuti nepo boomerang ichitenderera pachayo uye nekufambira mberi, banga iro panguva iyoyo rinotenderera munzira yekufamba kwe boomerang inotsigira kupfuura iyo iyo panguva iyoyo inotenderera yakanangana nekwairi kuenda kumberi, uko torque inogadzirwa kana gyroscopic precession mune iyoyo pfungwa.
Boomerangs saka anogona kuve nechero nhamba yemapeji. Iwo mashizha haafanire kunge akafanana kana iwo boomerang akaenzana; Kune ma boomerangs akaumbwa seV, W, ane matatu mashizha, mashizha anoparadzirwa senge mashizha eherikoputa, akaumbwa sekangaroo, kamba, hove, nezvimwe. Parizvino kushandiswa kwemitambo kwe boomerang kwakapararira kwazvo, kune makwikwi epasi rese uko, nekuzvibata, nzira yekuibata, kunyatso kudzoka, nguva yekufamba, nhamba ye "inobata" mune yakapihwa nguva kana daro iro inofamba isati yadzoka, kupa mienzaniso yakati wandei.
Haasi ese zvigadzirwa zvakawanzodaidzwa kunzi boomerang zvinodzoka kune iyo launcher: izvo izvo zvaishandiswa pakuvhima nemaAborigine eAustralia hazvina kudzoka uye zita ravo raisave boomerang, asi kylie.
Iwo ma boomerang anodzoka haana kuzomboshandiswa mukuvhima kana muhondo. Iyo kylie yakamira kushandiswa apo humwe hunyanzvi hwekuvhima senge huta nemiseve zvakaiswa.
Boomerangs haasi akasarudzika kuAustralia; chekare chakakwanisa kuve nemusi kusvika parizvino chakawanikwa muPoland muna 1987 uye zera rayo rinodarika makore zviuru makumi maviri. Ivo vakawanikwa pamakondinendi mashanu, paive kunyange navo muguva raTutankhamun, anopfuura makore zviuru zvitatu apfuura.
Iko kushandiswa kukuru kwakapihwa boomerangs muIjipita yekare kwaive sepfuti.
Nzira yekugadzira boomerang ine mita yemapuranga
Ehe; Ndinoziva kuti vhidhiyo iri muChirungu, asi uchiona uchanzwisisa zvakakwana maitiro ekuvaka iyi boomerang, ... Ramba uchiverenga
Nzira yekugadzira pepa boomerang
Mavhidhiyo matatu ekudzidzisa maitiro ekuita mini bepa boomerang.
Zvakareruka, asi zvinoshanda, kunyangwe ndichifanirwa kunyevera kuti zvinonetsa kuwana nzira yekuzvikanda kumashure. Usatarisira mhedzisiro senge yeavo boomerangs emapuranga kana zvimwe zvekushambadzira, asi semutambo wakasarudzika mumusangano kana wekuti vana vatambe zvakanaka kwazvo.
Ndakawana huwandu hwenenge makumi matatu - 30 cm. Saka unogona kuzviedza kuti uone kana uchikwanisa kuzvikunda ;-)
Ndinokusiyira mamwe mavhidhiyo akati wandei, kunyangwe paine chero awo angave akakwana, nekuti chiitiko ichi chiri nyore kwazvo kuita, kunyangwe isiri yakawanda kuwana bepa boomerang kudzoka kwauri.
Boomerang Blueprints naPierre Kutek
Iyi inotevera chinongedzo ine simba zvakanyanya munyika ye boomerang zvekuti ndinofunga inokodzera positi kuti isimbise.
Avo vanotanga seni, kana vanoda kuziva vanofanirwa kutarisa. Nyanzvi dzeBoom vanonyatso ziva, asi iyo inowanzo sosi yekureva.
Iyo webhu ye pierre kutek kwatinogona kuwana dhatabhesi yezvirongwa zveboomerang nemazana ezvirongwa zviripo
Hapana mubvunzo Iko kwakanyanya kuunganidzwa kwepfuti dzeboomerangs iyo iwe yaunowana pane internet.
Boomerang ine CD kana DVD
Vanoti kusaziva kunotyisa…. uye humbowo hweiyi kuedza kwangu ku kuvaka boomerang ine cd, izvo zvakazove kukundikana kwakazara.
Asi nekuda kwezita rangu rakavhura blog, Boomeralia yakakurudzirwa, tinogona kuona zvirongwa uye prototype ye boomerang ine CD
Uye ini ndinotora kodzero yekuridza CD / DVD
Ndicho Stanislaus kuwedzera, Ini handisati ndaziva kuti iye ndiani uye wandinoda kumbotaurwa nezvake
Gadzira boomerang neCD (Kukundikana)
Imwe nguva yapfuura ndakaverenga kuti iwe unogona cpakugadzira boomerang uchishandisa CD, uye kuti zvaigoneka kubhururuka neredhiyo ye1 m uye ini ndaifanirwa kuyiyedza.
Asati chero chinhu uye shure kwangu kutadza kwekutanga kuvaka boomerang Ndinofanira kukuyambira kuti iyi haina kumbobhururuka kana.
Kuvaka boomerang 1
Ndave nenguva ndichida gadzira yangu boomerang. Kune mawebhusaiti ane hurongwa hwakadzama uye tsananguro pamusoro pezvinhu zvekushandisa uye nzira yekuvaka.
Asi senguva dzose, ndaifanira kuratidza zvandakanga ndaisa mumusoro mangu, uye kunzwa kunyange hazvo vanhu vazhinji vaipa zano pamusoro pazvo.
Ini ndanga ndisiri kuzoburitsa ichi posvo, asi sei kukanganisa kunoenderana, heino iyo kuyedza kuvaka chena-muswe boomerang.
Pfungwa yacho iri nyore. ndine boomerang, Ndogadzira chakuvhe kubva pairi ndobva ndangoizadza neglue chena.
Sei kukanda boomerang
Kunyangwe mune ino blog zvirimo ndezvekutanga kana nekuwedzera kwedu, tinoita zvakasarudzika kutumira chinyorwa ichi chekuti ungakanda sei boomerang yandinofunga yakakosha kune vese avo vanoda kutanga mune ino hobby / mutambo.
Chinyorwa uye mifananidzo yakatorwa kubva boomeralia. kubva kwavanobvumira kuburitswa kwechinyorwa.
Yakabatwa sezvaunoda chero bedzi chikamu chakatsetseka chiri kunze. Hazvina mhosva foshoro, ingave nezvigunwe zviviri kana neruoko rwese. Iwe unofanirwa kugona
Pushira mberi zvakanyanya zvakaoma
Ipa kutenderera kwakaringana, chinhu chakakosha uye chakaoma kuprinta kutenderera
Tichatora iyo boomerang sekuda kwedu, chero bedzi chikamu chakatsetseka chiri kunze uye chakakombama chikamu chiri padyo kumeso kwedu. Chero kubata kwatinoita kunoita chero bedzi tikachipa simba rakaringana. Iyo boomerang inobatwa neiyo convex chikamu ichienda kune anopfura. Chikamu chakatsetseka chinogara chiri chekunze. Uyu sketch kurudyi ruoko
Kuvaka uye kubhururuka boomerang
Lets kuedza kuvaka boomerangKunyangwe iri yakakosha, ine kubhururuka kwakakwana uye inotidzidzisa zvinhu nezve aerodynamics iyo yatinogona kunyorera kune mamwe mapurojekiti.
Chii chinonzi boomerang? Chaizvoizvo ibapiro iro nekuda kwechimiro charo, chimiro charo uye mhando yekumisikidzwa kwatinoita, tinoiwana kuti ibhururuke uye idzokere kwatiri. Nei izvi zvichiitika? Nekuenzanisira zvakakwana mapapiro emapapiro, takakwanisa kuburitsa kumanikidza kwakadzika muchikamu chepamusoro uye chepamusoro muchikamu chezasi, nekudaro tichigadzira izvo zvinodaidzwa kunzi kusimudzira "zvinoita sekunge takachinja hunhu hwegiravhiti". kuitirwa zvirinani. mune imwe chinyorwa chingadaidzwa Sei ndege dzichibhururuka?